Madaxwaynaha oo ku baaqay in Ciidamo hubaysan aan loo dhowaynin goobaha doorashooyinka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxwaynaha oo ku baaqay in Ciidamo hubaysan aan loo dhowaynin goobaha doorashooyinka
Madaxwaynaha oo ku baaqay in Ciidamo hubaysan aan loo dhowaynin goobaha doorashooyinka
Madaxweynaha ayaa ku baaqay in aanan ciidamo hubeysan oo aanan ahayn kuwa ku howlan sugidda ammaanka goobaha codbixinta aanan loo oggolaan gudaha iyo agagaarka goobaha ay ka socdaan doorashooyinka Aqalka Hoose.
Ugu dambeyntii, Madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhammaan hay’adaha hirgelinta doorashooyinka in tabashooyinka jira lagu xaliyo nidaamka oo baaritaano dhab ah laga sameeyo.
Madaxweynaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in waxii khilaaf ah ee jira ee si nabad ah ama dhaqan ah loo xalin waayo loo gudbiyo hay’adaha iyo guddiyada u xilsaaran si xal sharci ah looga gaaro oo waafaqsan hannaanka doorashooyinka ee lagu heshiiyey.
Maadaama doorashooyin noocan oo kale ah aan dalka mudo ka badan 47 sano ah lagu qaban, haddana waxaan rabnaa in doorashooyinka ay ku soo gabogaboobaan si habsami leh. Sidoo kale waxaan shacabka ugu baaqayaa inay kaalin wanaagsan ka qaataan sidii doorashoyinka noogu qabsoomi lahaayeen.
Previous articleInternational ceasefire team deployed to Galka’yo
Next articleHanti-dhowraha Guud ee Qaranka oo sheegay musuq badan uu ka jiro doorashada